Al-Shabaab oo u mahadcelisay Shirkadaha diyaaradaha kuna celisay digniinteeda ku aadan | Nabadi caadalad ayaa kaa horresa
Al-Shabaab oo u mahadcelisay Shirkadaha diyaaradaha kuna celisay digniinteeda ku aadan	Seteembar 19, 2008
Kadib markii Mujaahidiinta Al-shabaab xayiraad rasmi ah kusoo rogeen ishii kaliya ee u furnayd madaxda ridada iyo gaalada oo ahayd garoonka diyaaradaha Muqdisho waxa isa soo tarayay baroorta iyo qaylo dhaanta ka imaanaysa Madaxda ridada, Tigreega iyo Taageerayaashooda.
Waxa aan la soconaa tan iyo intii garoonku uu xirmay in Madaxda ridadu ay aflabadii dhawaaqeen, waxa maalintii hore hadlay Xaabsade oo u qaabilsan maamulka ridada waxaanu sheegay in ay soo dagi doonaan diyaaradihii maamulka ridadu ay isticmaali jireen maalinta arabacada oo ahayd shalay, wax soo dagayna lama arag, sidoo kale waxa maalintii talaadada la filayay diyaarado ka imaanayay Itoobiya oo qaadi lahaa qaar ka tirsan madax kufaarta iyo radada.
Hadda hadalkii u dambeeyay ee madaxda ridadu wuxuu kusoo ururay hanjabaad ay u jeedinayaan diyaaradaha shirkadaha shacabka oo ay u qabteen 24 saac, oo hadda ay ka harsantahay saacad iyo bar kaliya, waxaanay rabaan in ay iyaga ay halaaga ku tijaabiyaan kadib markii Itoobiya iyo gaaladii kaleba ay la baqeen diyaaradahoodii.
Arinta ugu daran hadda ee soo food saartay maamulka ridada ayaa ah in uu xayiranyahay Murtad Cabdillaahi Yuusuf oo ka qayb gali lahaa shirka Qaramada midoobay uga furmay Newyork, waxaanay rabeen in ay ku dhex qariyaan diyaaradaha shacabka taasoo u suuro gali wayday.
Waxaa jira hadalo kasoo baxaya dad taageerayaal u ah cadowga oo damiir diineed iyo mid wadaninimo midna aan lahayn, kuwaas oo iska dhigaya kuwo u damqanaya shacabka, miyay ka hadlaan xasuuqa shacabka loo gaysanayo oo ay u gaysanayaan kuwa garoonka gacanta ku hayay.
Dhinaca kale waxaa in loo mahad celiyo mudan maaulada shirkadaha diyaaradaha oo si dhamaystiran u qaatay fariintii Mujaahidiinta isla markaana joojiyay duulimaadyadii ay ku imaan jireen garoonka.
Mujaahidiinta Al-shabaab waxay mar labaad digniin u dirayaan diyaarad kasta oo isku dayda in ay jabiso xayiraadda garoonka, waxaana loo aqoonsan doonaa in ay tahay diyaarad lagu qaadayo Cabdilaahi Yuusuf iyo madaxda kufaarta ee ku xayiran gudaha Muqdisho ama hub iyo saanad u wadda.